musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bangladesh Kuputsa Nhau » Vanosvika makumi maviri nevaviri vakaurawa, vakawanda vakashaikwa muBangladesh njodzi yechikepe
Bangladesh Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nyanzvi dzinopa mhosva kuchengetedzwa kwakashata, kuregeredza zviyero pamayadhi engarava uye kuwandisa kwevakawanda vezviitiko zvinouraya.
Chikepe chevapfuuri chinonyura mudziva mutaundi reBijoynagar kumabvazuva kweBangladesh.
Chikepe chevapfuuri chinonzi chakapesana nechikepe chinotakura zvinhu.
Vanhu vanosvika makumi maviri nevaviri vakafa muchikepe chichi nyura.
Chikepe chevapfuuri chinonzi chakatakura vanhu vanopfuura makumi matanhatu vakanyura mudziva kumabvazuva kweBangladesh mushure mekurovera nechikepe chakatakura zvinhu.
Vanhu vanosvika makumi maviri nevaviri vakaurayiwa uye vakawanda vakasara vasipo muchiitiko chakaitika pane rimwe nyanza mutaundi reBijoynagar, vakuru veko vakati.
Yengarava yesimbi yekutakura zvinhu uye chikepe chakabonderana, zvichikonzera kuti ngarava yemutakurwi ipunzike, sekureva kwevakuru vemuno.
Vanunuri vatora mitumbi makumi maviri neshanu kusanganisira vakadzi vapfumbamwe nevana vatanhatu kusvika parizvino, asi vakuru vanoyambira kuti huwandu hwevakafa hungangokwira.
Hazvina kujeka kuti vangani vanhu vaive mubhodhi panguva yekurovera, uye chaizvo vangani vanoramba vasipo. Sekureva kwemupurisa wemunharaunda, vakapona vakati vanhu vanosvika zana vaive mungarava.
Vatyairi vaitsvaga nzvimbo yemitumbi, uye zvivimbiso zvainge zvashevedzwa kubva kumaguta akavakidzana. Nharaunda dzakabatanawo nekununura.
Mapurisa akati vanosvika vanhu vanomwe vakaendeswa kuchipatara cheko mushure mekunge vanunurwa muchikepe chakanyura.
Nzvimbo yenjodzi iri mamaira makumi mashanu neshanu (51km) kumabvazuva kweguta guru, Dhaka. Vakuru vemunharaunda vakaumba komiti yekuongorora tsaona iyi.
The kunyura yaive yekupedzisira muchikamu chezviitiko zvakafanana munyika yeSouth Asia. Muna Kubvumbi naMay, makumi mashanu nevapfumbamwe vakaurayiwa munjodzi mbiri dzakaparadzanisa tsaona.
Muna Chikumi wegore rapfuura, chikepe chakanyura muDhaka mushure mekurohwa kubva kumashure nechimwe chikepe, ichiuraya vanhu vangangoita makumi matatu nemaviri. Muna Kukadzi 32, vanhu vanosvika makumi manomwe nevasere vakafa pakazara ngarava yakawandisa nechikepe chinotakura zvinhu.